InboxAware: Fametrahana Inbox Email, Fanaraha-maso ary fanaraha-maso laza | Martech Zone
InboxAware: Fanaraha-maso Inbox Email, fanaraha-maso ary fanaraha-maso laza
Ny fandefasana mailaka amin'ny boaty dia mitohy ho dingana mahakivy ho an'ny orinasa ara-dalàna satria manohy manararaotra sy manimba ny indostria ny spam. Satria mora sy tsy lafo ny mandefa mailaka, dia afaka mitsambikina avy hatrany amin'ny serivisy mankany amin'ny serivisy ny spam, na koa ny script navoakan'izy ireo avy amin'ny mpizara mankany amin'ny mpizara. Mpanome tolotra Internet (mpanome tolotra aterineto) noterena hanamarina ireo mpandefa, hanangana laza amin'ny fandefasana adiresy IP sy sehatra, ary koa ny fanamarinana isaky ny ambaratonga mailaka hanandrana sy hisamborana ireo meloka.
Mampalahelo fa amin'ny alàlan'ny fitandremana be dia be, matetika ny orinasa dia mahita fa mihantona ao amin'ireo algorithma ary ny mailaka alefany dia mivantana mankany amin'ny sivana junk. Rehefa ampitaina any amin'ny folder junk, dia nampitaina ara-teknika ny mailaka ary; vokatr'izany dia tsy tsikaritr'ireo orinasa fa tsy nahazo ny hafatr'izy ireo velively ny mpamandrika. Raha ny fahaterahana taloha dia ampifandraisina mivantana amin'ny kalitaon'ny mpanome tolotra mailaka anao, ny fahafaha-mamonjy dia miankina amin'ny algorithma fotsiny ankehitriny.
Na inona na inona nanorenanao ny serivisinao manokana, dia amin'ny adiresy IP nozaraina ianao, na adiresy IP natokana… tena ilaina ny manara-maso ny fametrahana ny boaty fampidirana anao. Ary, raha sendra mifindra monina amin'ny mpanome tolotra vaovao ianao ary manafana ny adiresy IP, ny fanaraha-maso dia dingana iray tena ilaina tokoa mba hiantohana ireo hafatrao hitan'ny mpamandrika.
Raha te hanara-maso tsara raha toa ny mailaka nahatonga azy ireo tao anaty boaty fa tsy ny fampirimana junk, dia tsy maintsy apetakao ny lisitry ny mpanjifa manerana ny ISP. Io dia ahafahan'ny mpivarotra mailaka hanao manara-maso ny fametrahana boaty ary avy eo alamino ny olany amin'ny ambaratonga fanamarinana, ny lazan'ny haavo, na ny haavon'ny mailaka hahafantarana ny antony mety hamindrana ny mailak'izy ireo amin'ny lahatahiry junk.
Sehatra famindrana InboxAware
InboxAware dia manana ny fiasa rehetra ilaina amin'ny fanaraha-maso ny fametrahana ny boaty mailakao, ny lazanao ary ny fahafaha-manatitra anao amin'ny ankapobeny:
Fanaraha-maso ny lazan'ny mailaka - Mahazoa fiadanan-tsaina amin'ny fanairana mandeha ho azy sy ny fanaraha-maso ny tokonam-baravarana. Apetraho ny tokonam-baravaran'ny fanekenao ary avelao hampandre anao izahay rehefa misy zavatra tsy mety.
Fitsapana ny lisitra voa - modely manaraka ny fanao tsara indrindra ampiasain'ny manam-pahaizana momba ny mailaka, ny fanaraha-maso ny fametrahana InboxAware dia ahafahan'ny mpivarotra mailaka hamantatra sy handresy ireo sivana fanamarinana sy ireo fandrika spam izay afaka mampiato ny mailaka alohan'ny handefasanao.
Tatitra momba ny famonjena - InboxAware dia manome ny mpampiasa fomba fijery mangarahara sy mikraoskaopy momba ny angon-drakitra mailaka rehetra, izay azo sivanina sy hokapahina nefa tsy manondrana ao anaty tatitra vakiana fotsiny.
InboxAware dia mamela anao hamboarina ny dashboard anao manokana amin'ny alàlan'ny fisafidianana ireo widgets mitatitra maro sy fandaminana azy ireo miaraka amina fampiasa drag-and-drop tsotra. Ny fikaonan'izy ireo ny Widget interactive dia manara-maso ny zava-bitan'ny mailakao amin'ireo mari-pamantarana marobe.
Mamandriha Demo InboxAware Demo
Fampahafantarana: Mampiasa ny rohy ifandraisanay amin'ity lahatsoratra ity izahay.
Tags: fanateranasehatra fanateranamailaka mailakalazan'ny mailakafitantanana laza malaza amin'ny mailakamailaka fanaraha-maso ny lazanyfanaraha-maso boatyinboxawarelisitry ny voa